बुद्ध एयरको विमान नेपालगञ्जमा आकस्मिक अवतरणपछि काठमाडौँ आइपुग्यो !
काठमाडौ : बुद्ध एयरको विमान नेपालगञ्जमा आकस्किम अवतरणपछि काठमाडौँ आइपुगेको छ । धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडेको विमानमा सवार एक यात्रुमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको हो ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको थियो । विमानस्थलमै स्वास्थ्य जाँच गरिएको र उनको अवस्था ठिक रहेको बुद्ध एयरले जनाएको छ ।ती यात्रु नेपालगन्ज विमानस्थलबाट आफन्तका साथ बाहिरिएपछि
बुद्धको उक्त जहाज काठमाडौँ आएको हो । आमा र छोरीबीचको प्रेम ‘आमा’ कवि कृष्ण बोहरा यात्रीको ‘आमा’ बोलको गीत बजारमा आएको छ । यो उनको पहिलो सांगीतिक कोसेली हो । यसै गीतमार्फत उनी आफूलाई कविबाट गीतकारका रूपमा चिनाएका छन् ।
यात्रीले पहिलो गीतबाटै दर्शकको धेरै माया पाएको बताए । उनले भने, ‘यो मेरो पहिलो सांगीतिक कोसेली भए पनि दर्शकले निकै मन पराइदिनु भएको छ । यसले थप ऊर्जा थपेको छ ।’
उनले गीतमा विशेषगरी आमा गुमाएकाहरूको पीडा र स्व. आमा सुभद्रादेवी बोहराको सम्झनालाई समेटेको बताए । ‘मैले आमालाई अन्तिम प्रहरमा पनि भेट्न सकिनँ । त्यसैेले ममा एक प्रकारको पीडा र छटपटी थियो । जुन मैले शब्दमा उतारेँ । आमामै समर्पित भएकोले यो मार्मिक पनि बनेको छ ।’
म्युजिक भिडियो भने आमा र छोरीबीचको माया दर्साइएको छ । मालश्री स्टुडियोबाट निर्मित उक्त गीतको निर्देशन प्रकाश भट्टले गरेका छन् । यसमा शान्ति श्री परियारको स्वर छ भने चर्चित गायक तथा संगीतकार चक्र बमले संगीत भरेका छन् ।
त्यस्तै, अञ्जली अधिकारी, हिउँवाला गौतम, श्याम बोहरा र गणेश खत्रीको अभिनय रहेको छ । उक्त गीत यात्रीकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतको संगीत संयोजन विनोद बाजुराली र अडियो मिक्सिङमा खड्क बाजुरालीले गरेका छन् ।
आफ्नी स्वर्गिय आमा सुभद्रा देवी बोहराको सम्झनामा समर्पित रहेर यात्रीले उक्त गित बजारमा ल्याएका हुन । गितमा छोरी र आमाको एकअर्का प्रतिको माया र स्नेहलाई दर्शाइएको छ । यात्रीले यसअघि ‘मैले जन्माएको छोरो’ कविता संग्रह बजारमा ल्याएका छन् ।
२०७८ चैत्र २४, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 149 Views